पुनर्निर्माणमा खटिने स्वयंसेवकका यस्ता छन कार्यक्षेत्र र मापदण्ड - Suvham News
पुनर्निर्माणमा खटिने स्वयंसेवकका यस्ता छन कार्यक्षेत्र र मापदण्ड
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न १५ दिन समय तोकेर जेठ ७ गतेदेखि स्वयंसेवक परिचालन गर्दै छ ।
स्वयंसेवकले आफ्नो खर्चको व्यवस्था आफै गर्नुपर्ने छ भने अनुदान रकम वितरणसम्बन्धी सम्झौताहरुमा सहजिकरणका लागि सम्बन्धित गाविस, नगरपालिका वा जिल्लाकै बासिन्दा मात्र स्वयंसेवक बन्न पाउने शर्त प्राधिकरणले तोकेको छ ।
जनशक्ति अभावमा पुनर्निर्माण प्रभावकारी नभएको भन्दै प्राधिकरणले ल्याएको स्वयंसेवक परिचालनको अवधारणामा स्वयंसेवक परिचालन हुन लागेका हुन ।
स्वयंसेवकले के के गर्न पाउँछन त ? यस्ता छन् स्वयंसेवकहरुको लागि तोकिएका ४ वटा कार्यक्षेत्र –
अनुदान रकम वितरणका लागि गाविस सचिव तथा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र लाभग्राही घरधनीका बीच हुने सम्झौताका लागि सहजीकरण गर्ने ।
अनुदान सम्झौताका क्रममा आउने गुनाँसोलाई व्यवस्थित ढंगले दर्ता गरी समाधान गराउन गाविस वा नगरपालिका कार्यालयहरुलाई सहयोग पुर्याउने ।
हालसम्म पनि पालमुनि बसिरहेका भूकम्प पीडितलाई वर्षात अगाडि नै व्यक्तिगत वा सामूहिक अस्थायी आवासमा ल्याउन सहयोग पुर्याउने।
समुदायमा विभिन्न कारणले पछाडि परेका घरपरिवार वा हालसम्म पनि पालमुनि बसिरहेका घरपरिवारहरुले स्थायी आवास पुनर्निर्माण गर्न चाहेमा सहयोग र्पुयाउ पुर्याउने ।
यी काममा स्वयंसेवकका लागि मापदण्डहरु निर्धारण गरिएका छन्। कस्ता छन् त मापदण्ड ?
अनुदान सम्झौता तथा बैँक खाता खोल्न सहयोग गर्ने स्वयंसेवक सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकाकै हुनुपर्ने। यो काममा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने संघसंस्था वा राजनैतिक पार्टीहरुले गाविस वा नगरपालिकामा जेठ ५ गतेभित्र नाम दर्ता गराउनुपर्ने ।
अस्थायी वा स्थायी आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने स्वयंसेवकहरुले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिमा जेठ ५ भित्र नाम दर्ता गराउनुपर्ने । यस्ता स्वयंसेवक सम्बन्धित जिल्लाकै हुनुपर्नेछ भने शारीरिक रुपमा तन्दुरुस्त हुनुपर्नेछ। यो कामका लागि चाहिने स्वयंसेवकको संख्या जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समितिले यकिन गर्नेछ ।
स्थायी वा अस्थायी आवासहरुको निर्माणमा संलग्न हुने स्वयंसेवकले सहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगतका सम्बन्धित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रशिक्षकबाट तालिम लिनुपर्ने ।
अनुदान सम्झौता एवं गुनासो व्यवस्थापनमा संलग्न हुने स्वयंसेवकले गाविस सचिव वा इन्जिनियरबाट तालिम लिनुपर्नेछ ।
स्वयंसेवकहरुले आफ्नो यातायात, बसोबास तथा खानपानको व्यवस्था लगायत अन्य सबै खर्चहरु आफै गर्नुपर्ने ।
स्वयं सेवकहरुले स्थानीय भूकम्प पीडित जनताको मनोभावनाको प्रतिकूल हुने गरी कुनैपनि काम गर्न र थप आर्थिक भार पार्न पाइने छैन ।
Prevचीनबाट सामान ल्याउनका लागि ५ सय कन्टेनर
Nextमुकाला आक्रमणमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३७ पुग्यो